ထိုင်းနိုင်ငံဆန္ဒပြပွဲတွေက မွတ်ဆလင်တွေဦးဆောင်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား? လက်သုံးချောင်းထောင်တယ်ဆိုတာကကော ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ? – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံတကာ>>ထိုင်းနိုင်ငံဆန္ဒပြပွဲတွေက မွတ်ဆလင်တွေဦးဆောင်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား? လက်သုံးချောင်းထောင်တယ်ဆိုတာကကော ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ?
တွေးပြီးမှယုံOctober 18, 2020
အခုလတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး၊ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့နဲ့ ဘုရင့်အာဏာလျှော့ချဖို့ စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ထိုင်းဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်းက အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ သတင်းအမှားတွေဖြန့်ဝေနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီသတင်းအမှားတွေကို မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဆိုတဲ့ အကောင့်တစ်ခုကနေ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က စတင်ဖြန့်ဝေထားခဲ့ပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း ၈၃၈ ဦးရှိနေခဲ့ပြီး အဲ့နေ့တစ်နေ့တည်းမှာပဲ Aung Aung ဆိုတဲ့ အကောင့်ကနေလည်း ပုံစံတူဖြန့်ဝေထားခဲ့ပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း ၂၂၆၈ ဦးရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအမှားထဲမှာဆိုရင် “အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဦးဆောင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရင်ကြီးကို ဖြုတ်ချနေကြကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်တော့မယ်၊ လက်သုံးချောင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အလ္လာဟ်ရဲ့ သားသမီးဖြစ်တယ်” ဆိုပြီး အချက်အလက် အမှားတွေနဲ့ ရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ်။ ဒါအပြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်သုံးချောင်းထောင်နေတဲ့ ပုံနဲ့ ပါတ်သက်လို့လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ နှီးနွှယ်ပြီး သတင်းအမှားတွေ ဖြန့်ဝေနေကြပြန်ပါတယ်။ ဒီသတင်းအမှားတွေကို ဒီလင့်ခ် မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီသတင်းအမှားနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေးပြီးမှယုံကနေ သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးကြည့်ရာမှာတော့ သတင်းအမှားဖြစ်နေတာကို အောက်က အချက်အလက်တွေအရ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဒီဆန္ဒပြတွေမှာဆိုရင် ဦးဆောင်သူများဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကနေ ဦးဆောင်ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများ ပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေကြတာက ထိုင်းဘုရင်ဖြုတ်ချရန်အတွက်မဟုတ်ပဲ ဘုရင်စနစ်အာဏာလျှော့ချရေး၊ တော်ဝင်အသုံးစရိတ်လျှော့ချရေးစတဲ့ ဘုရင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကို Bangkok Post က “Protesters reiterate3key demands” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ လက်သုံးချောင်းထောင် သင်္ကေတမှာလည်း အလ္လာဟ်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ကြောင်း ရည်ညွှန်းလိုတာမဟုတ်ပဲ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရည်ညွှန်းလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ChannelNewsAsia က “The story behind Thailand’s Hunger Games protest salute” ဆိုပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်သုံးချောင်းထောင်ထားတဲ့ပုံဟာဆိုရင်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်က မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ကင်းထောက်လူငယ်အကြီးအကဲအဖြစ် ခံယူပွဲက ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အကြောင်းကို တွေးပြီးမှယုံ ကနေ ဒီလို ဖြေရှင်းထားခဲ့ပါတယ်။
Michael Kyaw Myint ဆိုသူက အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြင့်မားတိုးတက်ရေးပါတီမှ ဗဟို အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Aung Aung ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ မည်သူမည်သူဝါမှန်း ဖော်ပြထားတာ မရှိတဲ့ အကောင့်တုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တွေးပြီးမှယုံကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရာမှာတော့ ခုချိန်ထိ ပြန်လည်ဖြေကြားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံလို ဘာသာရေးပဋိပက္ခ အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုဘာသာရေးအခြေပြုပြီး သတင်းအမှားများဖြန့်ဝေနေမှုဟာ အခြားဘာသာများ အပေါ် အထင်မြင်လွဲမှားသွားစေနိုင်ပါတယ်။